foodpanda ရဲ့ ပို့ဆောင်ရေးအလုပ်များ| ဒီနေ့ပဲ လျှောက်ထားလိုက်ပါ။
ရဲ့ ပို့ဆောင်သူအဖြစ် စတင်လိုက်ပါ။ foodpanda
သင်နေထိုင်ရာမြို့နှင့် ယာဉ်အမျိုးအစားကို ထည့်သွင်းပါ။
လှည့်ပတ်မောင်းနှင်ကြည့်ရှုရင်း သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ခရီးသွားအကြံပေးအဖြစ် တာဝန်ယူလိုက်ပါ။ နေ့တိုင်း အသစ်အသစ်တွေကို တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။
Tips? ဟုတ်ကဲ့ လက်ခံနိုင်ပါတယ်!
တစ်နာရီအတွက် ၂,၀၀၀ ကျပ် အထိ ဝင်ငွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ အပိုဝန်ဆောင်ခဆုကြေးငွေကို သင်ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်လက်ခံနိုင်မှာပါ။
ရှင်းလင်းသော payment scheme
အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီး
foopanda မှာလုပ်ဖြစ်တာကလမ်းမှာတွေ့ပြီးအားကျလို့ပါ။ လုပ်ခများများရတဲ့အတွက်ကြောင့် မိသားစုနဲ့အတူပျော်ရပါတယ်။ ပျော်တယ်ဗျ! ဘာသာလူမျိုးမတူတာတွေကိုဖယ်လိုက်ရင် အကုန်လုံးဟာညီအကိုတွေလိုဘဲ အတူတူရယ်ကြမောကြနဲ့ ဒုတိယမိသားစုလိုပါဘဲ!
မြို့အနှံလျောက်သွားပြီး စက်ဘီးလည်းစီးရင်း အလုပ်လည်းလုပ်ရင်းဆိုတော့ ဝါသနာနဲ့အလုပ် ထပ်တူကျလို့ ဒီအလုပ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ ၃သိန်းလောက်ကို တကယ်ကြိုးစားရင် ၁ ပတ် ၂ ပတ်အတွင်းရတော့ ပင်ပန်းတယ်ကိုမရှိဘူး! အရမ်းစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်။